Nke a bụ nke e mere ka ọ pụtakwuo ihè site n'aka nnukwu onye enyemaka pụrụ iche nye ya bụ onyeisi ala na mgbasa ozi, bụ maazị Garba Shehu, bụ onye mekwara ka a mara na Buharị kwuru okwu banyere mgbusi ahụ oge ya na ndị e ji okwu ha agba izu na Jọs nwere nzukọ iji kpaa banyere nke ahụ. Onyeisi ala n'onwe ya bụ Buharị akatọọla kpam kpam otu ndị mmadụ si ekwu na o nweghị ihe ọ bụla nwere isi o kwuru banyere ọnọdụ ahụ n'ihi na ya onwe ya dịkwa ka otu onye n'ime ndị Fụlani ahụ na-achị ehi; o wee kpọkuo ụmụafọ Nigeria ka ha ghara ịña ntị n'akụkọ ahụ ọ kọwara dịka nke enweghị isi na ọdụ, dịka o kwuru na nke ahụ pụrụ ikposa udo na ezi mmekọrịta ahụ dị n'ala Nigeria.
O kwuru hoohaa na ya akatọọla mgbusi mmadụ ahụ dịka nke jọgburu onwe ya, ma kwuo na nke bụ ezi okwu bụ na dịka ya onwe ya siri mara, n'oge mbụ na Fụlani na-achị ehi adịghị ebu egbe, na ha adịghịkwa achọ nsogbu, ma sịkwazie na ọ gbara ya ngharị na ihe ọ na-anụzị ugbu a bụ na ndị Fụlani gburu mmadụ, bibie ihe a kọrọ n'ugbo, ma ọ bụ mee otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ adịghị mma na ntị.
Onyeisi ala mezịkwara ka a mara na ya akpọkuola ndị ọrụ nchekwa ka ha kee nkwụchà iji hụ na ụdị akụkọ ahụ na ihe ọjọọ ndị ọzọ eselitezịghị isi n'ala anyị ọzọ. Ndị ọzọ sonyere n'ọgbakọ ahụ gụnyere gọvanọ steeti Plateau, nke Kebbi na nke Mina, minista na-ahụ maka nchekwa n'ala, Mansur Dan-Ali; minista na-ahụ maka ihe na-eme n'ime obodo, bụ Maazị Abdulrahman Danbazzaụ; ogbò ya nke na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Laị Mọhammed; ndị ndu ụlọ nnọchianya na ụlọ ọgbakọ sineet ala anyị; ndị isi otu jikọtara ndị ụka; onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị bụ Ibrahim Idris, tinyere ndị ọzọ.
Otu ọ dị, otu jikọtara ndị ọrụ oyibo n'ala anyị bụ NLC akatọọla mwakpò ahụ n'ebe ọ dị ukwu, ma kpọkuo gọọmenti etiti ka o teta n'ụra ma rụọ ọra dịka nwoke iji wee weta nkwafu ọbara ahụ dị n'ala anyị n'isi njedobe maka na ya bụ ihe na-achọzị ịghọ omenala.
Onyeisi ndị otù ahụ n'ala anyị bụ maazị Ayuba Wabba mere ka a mara nke a n'Abụja, ma kwuoo hooha na nke a nwere ọtụtụ ọjọọ na mpaghara na ngalaba dị iche iche n'ala anyị, tinyekwuoro na ọ na-ebi ọnọdụ udo na ịdị n'otu ala Nigeria aka ọjọọ.